Myanmar Consulate-General,Chiang Mai, 9/4 Maneenopporat Soi 3,Sriphum,A.Mueang Chiang Mai, Chiang Mai (2021)
Chiang Mai, Chiang Rai, Nan, Phayao, Phrae, Mae Hong Son, Lampang, Lamphun, and Uttaradit.
မဲဟောင်ဆောင် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးရုံးမှ လုပ်ငန်းရှင်များအား တရားဝင်ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများသာ ငှားရမ်းရန် သတိပေးနှိုးဆော်ခြင်း
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများအတွက် အခြေခံပညာ စာပေးစာယူသင်သားများ ခေါ်ယူခြင်း ကြေညာချက်(။)
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မြောက်ပိုင်း(၉) ပြည်နယ်အတွင်း နေထိုင်လျက်ရှိကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကတ်ပြားများ (ပန်းရောင်ကတ်) ဆက်လက်သက်တမ်းတိုးရေး နှင့်ပတ်သက်၍ နှိုးဆော်ကြေညာချက် (၂)
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မြောက်ပိုင်း(၉) ပြည်နယ်အတွင်း နေထိုင်လျက်ရှိကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကတ်ပြားများ (ပန်းရောင်ကတ်) ဆက်လက်သက်တမ်းတိုးရေး နှင့်ပတ်သက်၍ နှိုးဆော်ကြေညာချက်
ချင်းမိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံနိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ချင်းမိုင်ခရိုင် အလုပ်သမားရုံးမှ ထုတ်ပြန်ချက်အား မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားသို့ ထပ်ဆင့်အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း (။)
ချင်းမိုင်ပြည်နယ်၊ ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီမှ အမှတ်စဉ် ၆၂/၂၅၆၄ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လမ်းညွှန်ချက်အား မြန်မာနိုင်ငံသား ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ သိသာနိုင်ပါရန် ကြေညာချက်
ချင်းမိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံနိုင်ရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်အား မြန်မာနိုင်ငံသားများ သိသာနိုင်ပါရန် ကြေညာချက်(။)
ကောင်စစ်ဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသားအကျိုး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ပုံမှန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း။
ကောင်စစ်ဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံသားများအကျိုး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ပုံမှန်ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း
Export Promotion Video of Myanmar Mango
Myantrade Corporate Video 31 8 2016 HD Quality
Photos from Ministry of Foreign Affairs Myanmar's post
Air Quality Monitoring Stations To Be Established Across Myanmar - GNLM
By Zin Lin Myint, Translated by Htut Htut (Twantay)
Photos from အလုပ်သမားသံအရာရှိရုံး Myanmar Labour Attache Office's post
၁၃-၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့သည် ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ဖြစ်၍ ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်ပါသည်
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ချင်းမိုင်ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မှ အမိန့် တစ်ရပ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းအား အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
Myanmar rejects ill-disguised, mischaracterized and politicized resolution co-sponsored by OIC and EU
(31-12-2020, New York)
On 31 December 2020, at its 48th plenary meeting (resumed) of the 75th UN General Assembly took action on Third Committee resolution against Myanmar. Myanmar delegation called for the vote and voted against resolution number IV contained in document A/75/478/Add.3.
In his explanation of the vote, the Permanent Representative reiterated that Myanmar would not accept the exploitation of human rights and any attempt as an abuse of UN mechanisms under the banner of human rights. He also highlighted the development in the political process and progress made in addressing human rights violations.
While categorically rejecting the resolution, the Permanent Representative stressed that the exertion of discriminatory scrutinization and political pressure with malicious intent would not contribute to Myanmar’s efforts in resolving the problems. However, he stated that Myanmar will continue working for the promotion and protection of human rights as well as towardsademocratic federal union for the betterment of the people of Myanmar.
ချင်းမိုင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်ဌာနမှ ပြည်နယ်အတွင်းခရီးသွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ခဲ့သောစည်းမျဉ်းအား မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး အနေဖြင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရန် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်း
+66 52 004211
รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Myanmar Consulate-General,Chiang Maiผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา
ส่งข้อความของคุณถึง Myanmar Consulate-General,Chiang Mai:
ချင်းမိုင်မြို့ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး မဲရုံနောက်ဆုံးရက်အဖြစ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်း
ချင်းမိုင်မြို့ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး မဲရုံ ဒုတိယနေ့
မဲဟောင်ဆောင် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးရုံးမှ လုပ်ငန်းရှင်များအား တရားဝင်ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများသာ ငှားရမ်းရန် သတိပေးနှိုးဆော်ခြင်း မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ ချင်းမိုင်မြို့
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများအတွက် အခြေခံပညာ စာပေးစာယူသင်သားများ ခေါ်ယူခြင်း ကြေညာချက်(။) မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ ချင်းမိုင်မြို့
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မြောက်ပိုင်း(၉) ပြည်နယ်အတွင်း နေထိုင်လျက်ရှိကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကတ်ပြားများ (ပန်းရောင်ကတ်) ဆက်လက်သက်တမ်းတိုးရေး နှင့်ပတ်သက်၍ နှိုးဆော်ကြေညာချက် (၂) မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ ချင်းမိုင်မြို့
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မြောက်ပိုင်း(၉) ပြည်နယ်အတွင်း နေထိုင်လျက်ရှိကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကတ်ပြားများ (ပန်းရောင်ကတ်) ဆက်လက်သက်တမ်းတိုးရေး နှင့်ပတ်သက်၍ နှိုးဆော်ကြေညာချက် မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ ချင်းမိုင်မြို့
ချင်းမိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံနိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ချင်းမိုင်ခရိုင် အလုပ်သမားရုံးမှ ထုတ်ပြန်ချက်အား မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားသို့ ထပ်ဆင့်အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း (။) မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ ချင်းမိုင်မြို့
ချင်းမိုင်ပြည်နယ်၊ ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီမှ အမှတ်စဉ် ၆၂/၂၅၆၄ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လမ်းညွှန်ချက်အား မြန်မာနိုင်ငံသား ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ သိသာနိုင်ပါရန် ကြေညာချက် မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ ချင်းမိုင်မြို့
ချင်းမိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံနိုင်ရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်အား မြန်မာနိုင်ငံသားများ သိသာနိုင်ပါရန် ကြေညာချက်(။) မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ ချင်းမိုင်မြို့
ကောင်စစ်ဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသားအကျိုး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ပုံမှန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း။ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ ချင်းမိုင်မြို့
ကောင်စစ်ဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံသားများအကျိုး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ပုံမှန်ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ ချင်းမိုင်မြို့